यी ‘हेभीवेइट’ ! जसको पाँच वर्षसम्म सिंहदरवारका भित्तामा फोटो झुण्डिने छैन — OnlineDabali
यी ‘हेभीवेइट’ ! जसको पाँच वर्षसम्म सिंहदरवारका भित्तामा फोटो झुण्डिने छैन
Posted on December 12, 2017 by अनलाइन डबली
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेस सभा निर्वाचनको नतिजा आइरहेको छ । बम–बारुद धुँवासँगै सम्पन्न चुनावको नतिजा कस्तो आउने छ भन्ने कुरा प्रष्टै भएको छ । समग्र चुनावको परिणाम २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचन जस्तै भएको छ । त्यतिबेला एक्लै माओवादीले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेलाई हराएको थियो भने अहिले एमाले–माके गठबन्धनले । यति फरक हो त्यो बेलाको चुनाव संविधान निर्माणको नाममा भएको थियो, अहिलेको अगामी सरकारको लागि । सरकारका केही नयाँ जिम्मेवारी पनि छ ।
यता बेला २०६४ भन्दा ठूलो झट्का नेपाली काँग्रेसलाई लागेको छ । उता बेला जोगिएका काँग्रेसका गडहरु यतिबेला भत्केका छन् । केही चर्चित अनुहारको सिंहदरवारको यात्रामा विराम लागेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका भावी प्रधानमन्त्रीको सम्भावित उम्मेदवार पूरानो संस्थापन पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेलको पराजयले त्यो समूहलाई ठूलो झट्का लागेको छ । त्यस्तै धेरै समय सिंहदरवारको डाडु पुन्यौ समातेका र फेरि समात्ने तयारीमा रहेकाहरुलाई पाँच वर्षको लागि विराम लागेको छ । अबको पाँच वर्षसम्म उनीहरुको फोटो सितल नीवास र सिंहदरवारका कुनै घरको भित्तामा नझुण्डिने भएको छन् ।
त्यस्तै केही अनुहारबारे यहाँ चर्चा गरिन्छ, साथैहरुले चुनाव हार्नुको कारणबारे जानकारी गर्दा पाठकहरुलाई उनीहरुलाई बुझ्न सजिलो नै हुनेछ ।
चुनाव हार्नेमा रामचन्द्र पौडेल नेपाली काँग्रेसको सबैभन्दा ठूलो नेता हुन् ।
पौडेल जन्म २००१ साल असोज ३० गते तनहुँको रिस्तीमा भएको हो । उनले विद्यार्थी हुँदा नै २०१७ सालदेखि राजनीति यात्रा सुरु गरेका हुन् । २०४८ सालमा तनहुँको क्षेत्र नम्बर १ बाट र २०५१, २०५६, २०६४ र २०७० मा क्षेत्र नम्बर २ बाट नै विजयी भएका थिए ।
एक कार्यकाल सभामुख भइसकेका नेता पौडेल प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा १७ पटकसम्म सहभागी भएर पनि सपना पूरा हुन सकेन । विभिन्न समयमा कृषि, शान्ति मन्त्रीको साथै उपप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका छन् पौडेल ।
नेपाली काँग्रेसभित्रका अध्ययनशील भएपनि आफूले पाएको ज्ञान कार्यकर्तालाई दिनसक्ने कला र क्षमता नहुँदा पार्टी संगठनमा कहिलै पहुँच बनाउन सकेनन् । गिरजाप्रसाद हुँदै शुसिल कोइरालकै आर्शिवाद बढी काम गरेको थियो । उनलाई लामो समय काठमाडौँ बस्ने र चुनाव लड्ने बेला मात्रौ चाहिने भएकोले तनहुँका जनताको पौडेलप्रतिको आकर्षण निकै घटेको छ ।
डा. रामशरण महत
जन्म २००७ साल पुस १७ गते नुवाकोटको कविलास–८ मा जन्मेका डा. महतले नुवाकोटलाई चुनावी थल बनाउँदै काठमाडौँमा सुविधा सम्पन्न महल बनाएका छन् । कुनै बेला यस्तो थियो नेपाली काँग्रेसमा महतलाई सम्पतिको रुपमा लिइन्थ्यो । अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका डा. महत महेश आचार्य बाहेक एकलौटी अर्थमन्त्री हुन् । गिरजाप्रसा कोइरालाको विश्वासपात्र महतले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भइसकेका छन् । २०३० सालदेखि राजनीति सुरु गरेका महत लामो समयदेखि पूर्खौली थातथलोबाट चुनाव जित्दै आएका छन् ।
महत पटक पटक अर्थमन्त्री र एकपटक पराराष्ट्रमन्त्री पनि भइसकेका छन् ।
डा. महतलाई थ्रुपै आरोप पनि छन् । नेपाली अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरमुखी बनाउने मुख्य भूमिका नै महतकै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षहुँदै अर्थमन्त्री हुँदा नेपालको विकास र अर्थतन्त्र परनिर्भर बनाउने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने मुख्या भूमिका महतकै छ । नेपाल सरकारको संयन्त्रलाई नीजिकरणको नाममा व्यपारी केन्द्रमा परिणत गरी जनतालाई राज्यले सेवा दिनबाट विमूख गराएको मुख्य दोष पनि महतकै हो ।
भूकम्प पीडितको जस्ता पाता, त्रिपालमा गरेको भनिएको भ्रष्टाचारले समेत लागेको छ । नुवाकोट महतको चुनावी थलो मात्रै हो । महतले लामा समयसम्म राज्यको ढुकुटीको चावी समाए पनि काठमाडौँदेखि नुवाकोटसम्म पुग्ने सडकमा यात्रा गर्ने सबैले थाहा पाएका छन् की महतको विकास कस्तो छ भनेर । तर, आफ्नो पूर्खौली घरसम्म पुग्ने सडक गोरेटो सडक भने पिच गरेका छन् ।
डा. महत सिर्जनशील नभएर सुँगा रटाई गर्ने नेताको रुपमा पनि लिइन्छ । उनमा नेपालीपन भन्दापनि बाह्य प्रभाव बढी छ । उनी जनताका नेता भन्दापनि एउटा निश्चित तप्काका नेता हुन् । नुवाकोटका मतदाताले अति भएपछि आफ्नो इमान्दारमा क्रमभंग गरेका छन् ।
बुबाको राजनीतिक ब्याजबाट खाइरहेका नेपालका केही नेतामध्ये विमलेन्द्र निधि पनि एक हुन् । महेन्द्रनारायण निधिको छोरा भएकै कारण उनी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय राजनीतिका खेलाडीको रुपमा स्थापित भए ।
२०१३ साल असोज १० गते धनुसाको नगराईनमा जन्मेकका निधि ०२५ सालदेखि राजनीति नजिक भएका हुन् । बुबाकै ब्याजमा निधि काँग्रेसका महामन्त्री, पटक पटक मन्त्री हुँदै उपप्रधानसहित गृहमन्त्री समेत भइसकेका छन् । उनले पहिलो पटक २०५६ सालमा पहिलो पटक सांसद भएका थिए ।
काँग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवाका मधेस पात्रका रुपमा रहेका निधि भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएका नेताहरुमध्येका एक हुन् । कुनै बेला अमेरिकाको मान्छे भन्दै भारतले देउवालाई विश्वास नगर्ने बेला निधिले पुलको रुपमा काम गरेका थिए । राजनीति संघर्षकै क्रममा केही वर्ष जेल समेत बसेको वर्ग उत्थान भएर मधेसका उत्पीडक बनिसकेका छन् । उनी गृहमन्त्री हुँदा भएको मधेस आन्दोलनको क्रममा सरकारले निकै दमन गरेको थियो । आन्दोलनका कमाण्डर मध्येका एक राजन्द्र महतोले बदला लिएका छन् ।
२००६ सालमा तेह्रथुममा जन्मेका कृष्णप्रसाद सिटौला नेपाली काँग्रेसका घुसघुसे नेता हुन् । उनी कम बोल्ने र पार्टीभित्रै धेरै खेल्ने नेताहरुको सूचीमा पर्दछन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको वरिपरीबाटै हुर्केका नेता सिटौला पछिल्लो पटक पार्टीभित्र आफ्नो अलगै गुट तयार गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिएर आफ्नो छुट्टै गुटको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् ।
२०४८ सालको आमचुनावमा झापाबाट पहिलो पटक सांसदको उम्मेदवारी दिएका नेता सिटौला परिजित भएका थिए । त्यसैगरी २०५१ सालको मध्यावधी चुनावमा पनि पराजित भएका सिटौला २०५६ सालमा निर्वाचति भएका थिए ।
२०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकारको गृहमन्त्री भएका सिटौलाले तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसँग राम्रो व्यवहार गरेका थिए । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित भएका सिटौला दोस्रो संविधान सभामा भने निर्वाचित भएका थिए ।
सिटौलासँग पनि कुनै सिर्जनशील विचार नभएको आरोप काँग्रेस कार्यकर्ताहरुले लगाउँदै आएका छन् । उनको चुनावी क्षेत्र झापालाई बनाउँदै आएका सिटौला त्यहाँका मतदाताको लागि पर्यटक नेता हुन् । गिरिजाप्रसादको सहयोगीका रुपमा काम गरेकै कारण नेपाली राजनीतिमा चर्चामा आएका हुन् ।
काँग्रेस राजनीतिका अर्का पराजित पात्र हुन् डा.प्रकाशशरण महत । उनी रामशरण महतका भाई हुन् तर दुवैबीच कहिलै राम्रो सम्बन्ध भएन ।
रामशरण गिरिजाको विश्वासपात्र भएकै कारण प्रकाशरणले देउवाको पुच्छर समाएका हुन् । उनी पनि समय र परिस्थितिसँग आफ्नो विचार र व्यवहारलाई अप गर्न नसक्ने पूरानै ढर्राका नेता हुन् । देउवाकै कारण उनले पनि सिंहदरवारका भित्तामा धेरै पटक फोटो झुण्ड्याईसकेका छन् । यो पटक नेकपा एमालेका महासचिव इश्वार पोखरेलसँग पराजित भएका छन् ।
२००४ असोज ११ गते जन्मेका नेता अर्जुननरसिंह केसी कुनै बेलाका चर्चित नेता हुन् । नेपाली काँग्रेसको प्रबक्त समेत भइसकेका नेता केसी काँग्रेसभित्रका अध्ययनशील नेताको रुपमा चिनिन्छन् । उनले बेलाबखत केही पत्रिकामा पनि लेख लेख्दै आएका छन् ।
केसी नेपाली काँग्रेसभित्रका बुढो साँढेजस्तै, युवा काँग्रेसीको लागि बाधक । उनीले पनि पटकपटक गरी सिंहदरवारका धेरै भित्तामा झुण्ड्यिाइसकेका छन् ।
काँग्रेसको नयाँ पुस्ताले केसीलाई पार्टीभित्र व्यक्तिवाद तथा परिवारवादबाट ग्रस्त नेताको रुपमा लिन्छ । रामशरण जस्तै केसी पनि चुनावको बेलामात्रै नुवाकोट जान्छन्, अघिपछि काठमाडौँमै सुविधाजनक बासोबास छ ।
नेपाली काँग्रेसभित्र शेखरलाई इमान्दार नेताको रुपमा लिइन्छ । शेखर राजनीतिशास्त्र भन्दा पनि स्वास्थ्यशास्त्र पढेका शेखर कोइराला परिवारभित्रका महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन् । यो पारिवारिक कुरा मात्रै हो, राजनीतिमा आएर मतदाताको लागि खासै उल्लेखनिय काम गरेका छैनन् । उनलाई त्यो अवसर पनि मिलेको छैन । कुनै बेला काँग्रेस राजनीतिका चर्चित पात्र नोना कोइरालाका छोरा शेखर २००७ भदौ ९ गते विराटनगरमा जन्मेका थिए ।
कोइराला परिवार भएकाले सानैबाट राजनीतिसँग कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएपनि उनले अधिकांश समय स्वास्थ्य सेवामै बिताए ।
वीर अस्पताल, कोशी अञ्चल अस्पताल, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सक हुँदै प्रशासनिक जिम्मेवारी समालेका शेखरले वीपीलाई घरभित्र नजरबन्द गरेर राखिएको बेला कोइरालाले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाइँको पत्र लिएपछि चर्चामा आएका थिए ।
शेखर पेशाले फिजिसियन डाक्टर हुन् । उनले पहिलो संविधान सभा चुनावमा मोरङबाटै चुनाव हारेका थिए भने दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा विजयी भएका थिए । सरकारी सेवा सुविधा खाएर डिपी–पीआर खल्तीमा राखेर बसेका कर्मचारीको सातो खाएका लालबाबु पण्डितले यस पटकको चुनामा पराजित गरेसँगै अबको पाँच वर्षसम्म सिंहदरवारको ढोका बन्द भएको छ ।
सुर्खेतका खड्का नेपाली काँग्रेसभित्रका चर्चित नेता हुन् । उनले काँग्रेसभित्र अनैतिक संस्कार र संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने छवि बनाएका छन् । विशेष गरी गृहमन्त्री हुँदा खड्का नेपाली सामाजले अस्वीकार गरेका क्रियाकलाप अंगालेका कारण पार्टीभित्र र बाहिर आलोचन भइरहन्छ । पार्टीभित्र गुण्डाराजलाई संस्थागत गर्न खड्को महत्वपूर्ण भूमिका रहेका काँग्रेसको नयाँ पुस्ताले बताउँदै आएको छ ।
कुनै बेला खड्का सुर्खेत आउँदा केहीले जयजयकार गर्थे,सबै व्यक्तिगत फाइदाको लागि । सुर्खेतबाट पटकपटक चुनाव जितेका खड्काले केही व्यक्ति वा समूहको लागि क्रान्ति गरेपनि समग्र मतदाताको लागि भने उल्लेखनिय कार्य रेकर्डमा छैन । अहिले सुर्खेत–१ बाट पराजित भएका छन् ।
राणा परिवारकी छोरी आरजु पार्टी सभापति तथा श्रीमान शेरबहादुर देउवाकै कारण राजनीतिमा देखिएकी हुन् ।
राणा परिवारमा हुर्केकी र त्यसपछि लगातार सत्ता र शक्तिमा रहेका देउवाको कारण राजनीति सेवा भन्दा पनि सत्तामा पुग्ने भर्याङको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रवृतिको विकास आरजुमा भयो । नेपाली महिलाहरुले भोग्नु परेका दुःख पीडा र समस्याबारे रत्ति जानकारी नभएपनि श्रीमानकै कारण संविधान सभामा प्रवेश पाइन् । पंचायत राजनीति राजनीतिमा राणा परिवारकी चर्चित पात्र आमा प्रतिभा राणाकै कारण सुदूरपश्चिमका देउवासँग विवाह पनि उनी त्यहाँ भिज्न सकिन् ।
भारतबाट मनोविज्ञानमा पीएचडी गरेकी राणा देउवामाथि हावी हुँदै धेरै काँग्रेस नेता र कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन् । उनले छाया देउवाको रुपमा लिइन्छ । आरजुलाई खुशी बनाउन सके देउवाबाट सबै काम लिन सकिन्छ भन्ने काँग्रेस एउटा संस्कारको विकास भएको छ ।
एनजिओमार्फत नेपालमा सबैभन्दा डरल ल्याउन सक्ने हैसियत आरजुसँग भएपनि उनलाई धनगढीका मतदाताले पत्याएनन् । उनको हारको कारण नै मतदातासँगको दुरीलाई कम नसक्नु, आफ्नो हितमा काम गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्नु, काँग्रेसका केही गलत स्वार्थ भएका बाहेक इमान्दार कार्यकर्तहरुसँग पुग्न नसक्नु नै हुन् । आरजुको लागि पनि पाँच वर्षसम्म संसद भवन र सिंहदरवारको ढोका बन्द भएको छ ।
त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसका चर्चित नेता रमेश लेखक, एनपी साउद, वीरबहादुर बलायर, हृदयराम धानीलगायत धेरै नेताहरु पराजित भएका छन् ।
समग्र काँग्रेसको अहिलेको परिणाम आउनु यसको आन्तरिक पक्ष नै मुख्य हो । चुनावअघि एमाले–माके गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धालाई समान्य रुपमा काँग्रेसले लियो । उसले न बलियो गठबन्धन बनाउन पनि सकेन न मतदातालाई नयाँ एजेण्डा दिन सक्यो । त्यसैगरी एमाले र माकेभित्र अन्तरविरोध हाल्न पनि काँग्रेस नेताहरुले सकेनन् । सबैले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने पार्टीभित्रै होडबाजी चल्यो । सभापति देउवाले सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुमा पुगेर आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेको केही समयपछि तनहुँमा रामचन्द्र र भित्री तराईमा महामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरे ।
नेतृत्वको हिसाबले सभापति देउवाको ७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने धोको नै चुनावी परिणामको मुख्य दोषी हो भन्न सकिन्छ । यदि देउवाले चुनावअघि पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर केही युवा नेताहरुलाई चुनावी प्रचारमा योजनाबद्ध खटाएको भए सम्भवत यति खराब परिणाम आउने थिएन होला ।
यो त काँग्रेसको कुरा भयो । एमाले र माकेबीचको चुनाव गठबन्धन बनाउनु सुरुदेखि भुमिका खेल्दै आएका मुख्य दुई नेता एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र माकेका पहिलेको उपाध्यक्ष र हाल आयोजक समितिका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पराजित भए । सामान्य जिल्ला नेताहरुले जित्ने लहर चलेका मुख्य नेताहरुले नै हारेपछि राजनीतिक वृतमा यसलाई अस्वभाविक रुपमा लिइएको छ ।
सामाजिक संजालमा ओली र प्रचण्डले पार्टीभित्रका मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई योजनावद्ध रुपमा हराएको नबताइएको पनि होइन । तर, यसलाई बल प्रदान गर्ने केही आधार पनि छन् । ओली र प्रचण्डले आगामी नयाँ बन्ने सरकारमा गौतम र श्रेष्ठलाई कही न कही व्यवस्थापन गर्नु नै पर्ने थियो । दुबै नेता आफ्नै स्वाभाव र शैलीका थिए । गौतम र श्रेष्ठ दुबै अरुजस्तो सजिला नेता पनि होइनन् । वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्रजंग पीटरले सामाजिक संजाल फेसबुकमा गौतम र श्रेष्ठलाई बाह्य योजनामै हराइएको बताएका थिए भने अर्का पत्रकार हरिहरसिंह राठौरले गौतम र श्रेष्ठले आफूलाई भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा पेश गरेकै कारण ओली र प्रचण्डले हराएको बताएका थिए ।
सन् १९४४ मा प्युठानमा जन्मेका नेता गौतम केही वर्षदेखि बर्दियालाई चुनावी थलो बनाउँदै आएका छन् ।
हक्की स्वाभावको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिका चर्चित पात्र हुन् । महत्वकांक्षी सपना देखेर पार्टी फुटाएर एमालेका नेताहरुले राष्ट्रघाती काम गरेको भन्दै युवा पंक्तिको ठूलो टीम बोकेर मेची–महाकाली पुग्दा समेत केही सिप नलागेपछि पुनः एकीकरणमा आएका थिए । त्यहीबेलादेखि एमालेभित्र एउटा समूहको नेतामा सिमित भए । पहिला माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालबीचमा खेलेका गौतमले पछिल्लो पटक केपी अ‍ोली र नेपाल पक्षबीच खेलिरहेको आरोप पनि लागिरहेको छ ।
पटक पटक मन्त्री हुँदै उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनिसकेका छन् गौतम । गृहमन्त्री हुँदा गौतमले सुन तस्करसँग साँठगाँठ गरेको आरोप एमालेकै नेताहरुले बेलाबखत लागउने गर्छन् । एमालेभित्र गुण्डाराजलाई प्रसय दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
गौतम दोस्रो संविधान सभामा प्युठान र बर्दियाबाट निर्वाचित भएका थिए । पछि बर्दिया छोडेर प्युठान रोजेका थिए । त्यहीबाट बर्दियाका मतदाता चिढिएका थिए । चिढिएका मतदाताको चित्त नबुझाएरै चुनावै मैदानमा गएका थिए । चुनाव लड्न बर्दिया जाने गरेपनि सुविधासम्पन्न बसाई काठमाडौँमै छ ।
बर्दियाका मतदाताको लागि उनले सिन्को समेत नभाँचेको आरोप चुनावको बेला लाग्ने थालेपछि भेरी डाईभर्सनलगायतका विकासे काम गर्ने वाचा गरेका थिए तर मतदाताले पत्याएनन् । अबको पाँच वर्ष गौतमको सिंहदरवार यात्रमा विराम लागेको छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठलाई माओवादी केन्द्रभित्र अवसरवादी नेताको रुपमा लिने गरिन्छ । जनयुद्धको बेला पछी हटेका नेता श्रेष्ठ माओवादी शान्तिप्रक्रिया आएसँगै एकतामा आएका हुन् । उनले जनयुद्धलाई ‘सामाजिक फासिवादी’ भन्दै आलोचना किताबको ढेली समेत लेखेका छन्, जुन बजारमा अहिले पनि पाइन्छन् ।
श्रेष्ठको माओवादीमा इन्ट्रीसँगै सुरु भएको विवाद विभाजनसम्मै पुग्यो । श्रेष्ठलाई जनयुद्ध लडेर आएका माओवादी कार्यकर्ताहरुले मनभित्रैबाट चुनावअघिसम्म स्वीकार गर्न सकेका थिएनन् । उनी ढोंगी, पाण्डी, गफास्टि भएको माकेकै नेताहरु बताउँछन् ।
२०१६ सालमा जन्मेका नेता श्रेष्ठ खुला राजनीतिमा आएपछि दुई पटक चुनावी मैदानमा गए, दुबै पटक पराजित भएका छन् । पहिलो संविधानसभामा टिके भएका श्रेष्ठ दोस्रो संविधान सभामा मकवानपुर–२ बाट पराजित भएका थिए ।
यो पटक श्रेष्ठले गोरखा– २ नछोड्ने भनेपछि बाबुराम भट्टराईले गठबन्धन नै तोड्नु पर्यो । गोरखाका मतदाताको लागि श्रेष्ठभन्दा बढी भट्टराई नै गरेको करा जगजाहेर हो । मतदाताले नारायणकाजीलाई भन्दा बाबुरामलाई रोजे ।
कमल थापा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका राजनीतिक उपलब्धीका विरोधी हुन् । सिधैभन्दा उनी गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष विरोधी नेता हुन् । उनी नेपाललाई पूरानै ठाउँमा फर्काउन चाहन्छन् । मतदाताहरु अहिलेको गणतन्त्रभन्दा अझ उन्नत शासनका माग गरिरहेका तर थापा भने घण्ट बचाउँदै गाई डुलाइरहेका छन् ।
२०१२ तनहुँको भिजेदुङमा जन्मेका थापाले चुनावी कर्मथलो मकवानपुरलाई बनाएका छन् । २०२८ सालबाट राप्रपाको राजनीति सुरु गरेका थापाको फोटो झुण्डिन सिंहदरवारको थोरै भित्ता बाँकी होलान् । थापाले सत्ताको लागि जे गर्ने र बन्न तयार हुने नेताको छवि बनाएका छन् ।
ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालमा गृहमन्त्री भएका थापाले जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमाथि दमन गरेका थिए । उनलाई कारवाहीको सिफासिर पनि गरिएको थियो । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गराएकै कारण उनीमाथि कारवाही भएन । आफूमागि कारवाही नहुने भएपछि थापाले राजतन्त्रको सेन्टिमेन्टलाई राजनीतिमा परिणत गर्न लागे ।
राप्रपामा आफूले भनेजस्तो नभएपछि छुट्टै पार्टी बनाए । उनी फेरि सबैलाई राप्रपाका समूहलाई आफूमा मिसाए तर उनको पूरानै प्रवृतिका कारण चुनावको मुखमा पशुपति शमशेरले पार्टी फुटाए ।
२०४३ र २०५१ चुनाव जिते तर २०७० समानुपातिकबाट सिंहदरवार प्रवेश गरेका थापाले उपप्रधान तथा गृहसहित ९ पटक फरक फरक मन्त्री भइसकेका छन् । अहिले पनि उपप्रधानसहित ऊर्जामन्त्री छन् ।
थापाले राजनीति गरेरै मतदाताको लागि भन्दापनि आफ्नो लागि धेरै गरेका छन् । समयअनुसार चल्न सक्ने क्षमता भएपनि त्यो आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि मात्रै हुने थापा कमवानपुरका मतदाताको लागि नयाँ पात्र होइनन् । गणतन्त्रको माग गर्दा थापाले तिनै मतदातालाई गोली लाठि उपहार दिएको धेरै भएको छैन ।
चुनाव हार्ने ‘हेभिवइट’ नेता हुन् पशुपति शमशेर जबरा । उनले पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सकेनन् । आफूले सिन्धुपाल्चो र उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले चितवनबाट चुनाव हारेका छन् ।
राणा शासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरका नाति नाति पशुपति २०३० सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । पञ्चायतकालिन समयका चर्चित पात्र राणालाई बहुदल हुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्था फापेका छन् । २०३३ मा पहिलो पटक मन्त्री भएका राणाले अर्थ, परराष्ट्र, जलस्रोत, सूचना तथा संचार, शिक्षा, पर्यटन, यातायात मन्त्रालयका भित्तामा फोटोहरु झुण्ड्याइसकेका छन् ।
राणा शासन अन्त्य भएपनि पशुपतिको राजनीति झन् मलजल भइरह्यो । २०४८, ०५१ र ०५६ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । कुनै बेलाको २० सिटे राप्रपा सरकार परिवर्तनको खेलमा केन्द्र भागमा थियो ।
सिन्धुपाल्चोकलाई बोट बैंक बनाएपनि त्यहाँका मतदातासँग उनको सम्बन्ध हुनेवाला सम्धिजस्तै थियो । मतदाताको रोग, भोगसँग राणाको कुनै सरोकार छैन । त्यसैले दुबै संविधान सभा निर्वाचनमा पनि पराजित भएका पशुपति यो पटक पनि पराजित नै भए ।
राणालाई झण्डै कमल थापाले राजनीतिबाट विदा गरिसकेका थिए । तर थापाको मिशन असफल बनाउँदै राणा एकता भएको दुई महिनामै पार्टी फुटाएर चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए । उनको पार्टी अब राष्ट्रिय पार्टी नहुने भएको छ ।
यी हेभिवइटहरु अर्को पाँच वर्षपछि फेरि चुनावी मैदानमा थोरैलाई मात्रै देख्न पाइने भने निश्चित छ । अधिकांश नेताहरु अागामी पाँच वर्षपछि उमेरका कारणले सक्रिय राजनीतिमा अाउन सक्ने छैनन् । कतिपय युवा जोसमै छन् । उनीहरुलाई अर्को चुनावी मैदानमा देखिन सक्छन् । फेरि चुनाव जानेहरुले चुनाव हारेपछि मतदातालाई धारे हान्नु भन्दापनि उनीहरुको मत जित्न अहिलेबाटै लाग्‍नुपर्ने हुन्छ । चुनाव अाएसँगै ‘जब पर्‍यो राति, तब बुढी ताती’ गर्दै जति खुट्टा ढोगेपनि अवस्था यस्तै हुनेछ ।
चुनावी समिक्षा जे भएपनि यी व्यक्तिहरु पार्टीको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेका छन् । राजनीतिमै लागेर कपाल फुलाएकाहरु राम्रो व्यस्था भएको भए सम्भवत देश र जनताको लागि केही योगदान दिन सक्ने थिए । तर, नेपालको राजनीतिक प्रणाली कर्मकाण्डी भएकाले उनीहरु पनि कर्मकाण्डमा सभागी हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
गच्छदारलाई कल्पना नगरेको भोट ! भगवतीको धड्‍कन बढ्‍यो
नेकपाका कैलाली इन्चार्जसहित चार जना रिहा
Posted in डवली विशेष, मुख्य खबर | Leaveareply
गोरे पत्‍नी निरु र सई बालकृष्णबीच सनमको हत्यापछि फोनमा यस्तो कुरा भएको थियो
रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुकालाई सावित्रीको पत्रः तपाईंलाई कडाभन्दा कडा कारबाही किन नगर्ने ?
बजेटबारे विप्लवले मुख खोलेः शब्दजालले भरिएको भाषण
प्याकुरेल र त्रिपाठी एक थाल भातका भतुवा हुन्ः बालकृष्ण (रिहापछिको भावुक सम्बोधनको भिडियो)
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले सचिवालयमा काँग्रेस कार्यकर्ता भित्र्याएपछि …
‘प्रचण्ड युग’को विलय ! यस्ता थिए जनयुद्ध सुरु गर्दा गरेका ७ बुँदे प्रतिवद्धता
पूर्वमाओवादी नेताहरुद्वार बालुवाटारको भोज बहिस्कार